प्रवास - मापसेका कारण १ सय १६ नेपाली युएईको कारागारमा - page 2
काठमाडौं । मादक पदार्थको सेवन (मापसे)का कारण सिर्जित समस्याबाट सबैभन्दा बढी नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले गत डिसेम्बर महिनामा युएईको सात वटा इमिरेट्समा रहेका आठ जेलमा गरेको अध्ययनका क्रममा मादक पदार्थका कारण ५८ प्रतिशत नेपाली युएईका विभिन्न कारागारमा कैद भुक्तानका क्रममा रहेको पाइएको हो । मादक पदार्थको सेवन, मापसे गरेर सवारी चलाउनु र झैझगडाका कारण ११६ नेपाली कारागारमा रहेको दूतावासले जनाएको छ । त्यस्तै लुटपाट, चोरी र धोखाधडीको आरोपमा २० नेपाली कारागारमा रहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
मलेसिया । मलेसियामा कार्यरत दुई नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । मलेसियाको बातु पहाडमा रहेको सिन कावाङ प्लाष्टिक कम्पनीमा रौतहटका सन्तोष यादव र ठेगाना नखुलेका चुरा दर्लामी मगरको मृत्यु भएको हो। हिजो बिहान रासायनिक ट्याङ्की सफा गर्ने क्रममा रसायनको गन्धले बेहोस भएका यादव ट्याङ्कीभित्र खसेका थिए । यादवलाई उद्धार गर्ने क्रममा मगर पनि बेहोस भएका थिए। रसायनको अत्याधिक असरका कारण श्वासप्रवास बन्द भएर उनीहरुको मृत्युभएको त्यही कम्पनीमा कार्यरत हिरालाल तामाङले जनाकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
मलेसिया । धेरै कमाउने र परिवारलाई सुखका साथ पाल्ने सपना बोकेर मलेसिया आइपुगेका नेपाली कामदारमध्ये दैनिक एक जनाको अकालमै ज्यान जाने गरेका छ । आत्महत्या, सडक दुर्घटना, कारखाना दुर्घटना, कडा रोगका कारण उनीहरुको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले दिएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ को हालसम्म ३२२ को विभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ । यो सङ्ख्या सन् २०१७ मा ३६४ रहेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
इलाम । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया पुगेर बेपत्ता बनेका एक व्यक्तिको मलेसियामै मृत्यु भएको छ । तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका सन्दकपुर गाउँपालिकाको सुलुबुङका नन्दकुमार शिवाकोटीको गत मङ्सिर १६ गते मृत्यु भएको परिवारले जनाएको छ । उनका छिमेकी नेत्र रिजालका अनुसार शिवाकोटीको मृत्यु के कारणले भयो भन्ने बारेमा भने खुलेको छैन ।शिवाकोटीको शवलाई आजै थाई एयरमार्फत नेपाल ल्याइने तयारी भइरहेको छ । पाँचथर स्थायी घर भएका शिवाकोटी केही वर्षअघि मात्र इलाम बसाइँ सरी आउनुभएको थियो । शिवाकोटीका श्रीमती र ६ जना छोरी रहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट मोरक्को प्रस्थान !
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट मोरक्कोमा आयोजना हुने सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता जिसिएम सम्मेलनमा सहभागी हुन साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन । मोरक्कोको माराकेसमा यही मङ्सिर २४ र २५ गते हुने उक्त सम्मेलनमा उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री विष्ट, श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहाल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईँले सहभागिता जनाउनेछन ।	थप पढ्नुहोस्
नेपाली महिलाको पोर्चुगलमा निधन
लिस्बन । क्यान्सर रोगबाट पीडित एक नेपाली महिलाको पोर्चुगलमा निधन भएको छ । विगत लामो समयदेखि सपरिवार पोर्चुगल बस्दै आएकी पोखरा महानगरपालिका– १७ छोरेपाटनकी ३९ वर्षीया मिरा नेपालीको निधन भएको हो । नेपालीको उपचारका क्रममा बुधबार राति अस्पतालमा निधन भएको नारी समाज पोर्चुगलकी अध्यक्ष सिता बरालले दिए । मृतक नेपाली तीन वर्षदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित बनेकी थिइन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । मृतक नेपालीको शव हाल राजधानी लिस्बनस्थित साओ ज्वोय अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ । उनको पोर्चुगलमै हिन्दु परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गरिने बताइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । तालिवानले बुधबार अफगानिस्तानको काबुलमा गरेको आक्रमणमा नेपाली पनि परेका छन । घाइते १६ मध्ये ११ जना नेपाली भएको पुष्टि भएको छ । जीफोरएसको कार्यालय परिसरमा बुधबार भएको आक्रमणमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालीको ज्यान नगएपनि घाइते भएका बिबिसीले जनाएको छ । अरु ५ जना बेलायती छन । घाइते नेपालीहरुको परिचय भने खुलेको छैन । घाइते नेपालीहरु ब्रिटिस सुरक्षासम्बन्धी कम्पनी जीफोरएसमा कार्यरत थिए । तालिवानले यसअघि काबुलमै गरेको आक्रमणमा १३ जना नेपालीको ज्यान गएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
जापानमा एक हजार नेपाली ईन्जिनियरलाई रोजगार !
भक्तपुर । जापानी कम्पनीले नेपाली आईटी ईन्जिनियरहरुलाई विद्यावारिधीसँगै जापान काम गर्ने अवसर दिने भएको छ । जापानस्थित ह्युमन रिसोर्सिया कम्पनी लिमिटेडले त्यसका लागि नेपालका तीन वटा ईन्जिनियरिङको पढाई हुने कलेजहरुसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, नेम कलेज काठमाडौं नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । कम्पनीका उपाध्यक्ष नाओकी इरेले नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरमा हालै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । अमेरिकाको बोस्टनमा मासिक रूपमा आयोजना हुदै आएको सिर्जना उत्सवको ३८औं शृंखला सम्पन्न भएको छ। विगत चार वर्षदेखि सिर्जजा उत्सवको आयोजना हुँदै आएको छ । साहित्यकार महेश्वर पन्तको संयोजन तथा शारदा पन्तको प्रायोजनमा आयोजित रात्रिभोजसहितको उक्त उत्सवमा विभिन्न साहित्यकार तथा संगीतकारद्वारा कविता, गीत, गजल र सांगीतिक कोशेली प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा बोस्टनका प्रशिद्ध तवला वादक प्रेमसागर खतिवडा तथा हरिमाया अधिकारीद्वारा सांगीतिक गीत गजल प्रस्तुत गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा डेढ दर्जन कविहरूले सिर्जनावाचन गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर एवम् विदेशमन्त्री आङ साङ सुकी दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उहाँहरु सद्भावना भ्रमणका क्रममा यही मङ्सिर १३ र १४ नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।	थप पढ्नुहोस्